သဒ္ဒါနှင့်ပါတ်သက်သော မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (အပိုင်း ၃) - Myanmar Network
သဒ္ဒါနှင့်ပါတ်သက်သော မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (အပိုင်း ၃)
Posted by Soe Soe Win on March 13, 2014 at 18:39 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခင် အပိုင်းမှ အဆက် - သဒ္ဒါနှင့်ပါတ်သက်သော မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (အပိုင်း ၂)
အခု တင်ပြသွားမှာကတော့ Oxford University Press ဝဘ်ဆိုက် မှ "Grammar to Go" သင်ခန်းစာ စာအုပ်ကို ဖတ်သူများမှ မေးမြန်းထားသည့် ၀ိဘတ် (Preposition) ဆိုင်ရာ မေးခွန်းအချို့ရဲ့ ဖြေကြားချက်များအား John Eastwood မှပြန်လည်ဖြေကြားထားသည်များကို ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
1. To (သို့) နှင့် For (အတွက်)
To နှင့် For နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Grammar to go ဖတ်သူတစ်ဦးက အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်။ အောက်ပါ ၀ါကျများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။
I gave my friendabook. (ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို စာအုပ်တစ်အုပ် ပေးခဲ့တယ်။)
I gave the book to my friend. (စာအုပ်ကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းသို့ ပေးခဲ့တယ်။)
I bought my friendabook. (ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို စာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်ခဲ့တယ်။)
I boughtabook for my friend. (စာအုပ်တစ်အုပ်ကို သူငယ်ချင်းအတွက် ၀ယ်ခဲ့တယ်။)
ဒီဥပမာတွေကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် to နှင့် for ပါတဲ့ ၀ါကျများသည် Indirect object (လက်ခံပြပုဒ်) ပါသော ၀ါကျများနှင့်သာ ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်သို့ (to) တစ်စုံတစ်ရာကို ပေးပြီး လူတစ်ဦး တစ်ယောက်အတွက် (for) တစ်စုံတစ်ခုဝယ်ပေးပါတယ်။ To ကတော့ လူတစ်ဦးမှ နောက်တစ်ဦးသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း (သို့) ဆက်သွယ်ပေးခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အရာတစ်ခုခုဟာ ၄င်း၏ ပန်းတိုင်သို့ ရောက်သွားသည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်ပါတယ်။ To နှင့် တွဲသုံးရတဲ့ ကြိယာများထဲမှာ lend, pay, show, send, write ဆိုတဲ့ verb တွေ ပါပါတယ်။ For ကတော့ တစ်ခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် အကျိုးရှိစေမဲ့အရာတစ်ခုခုကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ For နှင့် တွဲသုံးရသော ကြိယာများကတော့ cook, find, make, order, save အစရှိသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
2. By (မှာ) နှင့် Until (အထိ)
တချို့သောသူများသည် by (မှာ) နှင့် until (အထိ) တို့ အသုံးပြုပုံကို သိပ်မကွဲပြားလှပါ။ အောက်ပါဝါကျများ ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
The bill has to be paid by 15 May. (ငွေတောင်းခံလွှာကို မေလ(၁၅)ရက်နေ့မှာ ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။)
I'm staying in London unitl May 15. (ကျွန်တော် လန်ဒန်မြို့မှာ မေလ ၁၅ ရက်အထိ နေမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။)
By May 15 ဆိုတာကတော့ မေ ၁၅ ရက်မှာ (သို့) မေလ ၁၅ ရက်မတိုင်ခင် (သို့) မေလ ၁၅ ရက်ထက် နောက်မကျဘဲ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Until 15 May က မေ ၁၅ ရက်နေ့အထိ လန်ဒန်မှာ ဆက်နေမှာဖြစ်ပြီး ထိုနေ့ ကျရင်တော့ လန်ဒန်မှ ထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
နောက်ထပ် ဥပမာများကို ဆက်လက် လေ့လာကြည့်ပါ။
The teacher wants our homework by Friday. (ဆရာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်စာများကို သောကြာနေ့ မှာ လိုချင်ပါတယ်။)
They need to finish building the stadium by August, when the Games start. (Games တွေစမဲ့ August လ မတိုင်ခင် အားကစားရုံကို အပြီးဆောက်ပြီးဖို့ လိုပါတယ်။)
I'll be in the office until five. (ကျွန်တော် ရုံးခန်းမှာ ၅ နာရီအထိ ရှိနေပါမယ်။)
The road will be closed until the weekend. (စနေ၊ တနင်္ဂနွေအထိ လမ်းကို ပိတ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
Until ကို ဆန့်ကျင်သော သဘောဆောင်သော ၀ါကျများ (Negative Sentences) မှာ အသုံးပြုပါတယ်။
I didn't get home until midnight. (ကျွန်တော် သန်းခေါင်အထိ အိမ်ပြန်မရောက်ဘူး။) ဆိုလိုတာကတော့ သန်းခေါင်မှ ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်တယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းသည် ပုံမှန်အချိန်(သို့) မျှော်လင့်ထားတဲ့ အချိန်ထက်ပို၍ နောက်ကျတဲ့ သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။
3. On / in the market (ဈေးပေါ်တွင် / ဈေးထဲတွင်)
'Grammar to go' စာဖတ်သူတစ်ဦးက on the market နှင့် in the market ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းနှစ်ခု ခြားနားမှုရှိပါသလားလို့ မေးလာပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ရှိပါတယ်လို့ပဲ ဖြေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးအနှုန်း (၂)ခုကို အသုံးပြုရာမှာ အဓိပ္ပါယ်ကွဲပြားပါ။ On the market ကတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ၀ယ်ယူလို့ရနိုင်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ In the market ကတော့ ၀ယ်ယူချင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်ပါတယ်။
အောက်ပါ ဥပမာများကို လေ့လာကြည့်ပါ။
There are lots of different printers on the market. (များပြားလှတဲ့ printer အမျိုးမျိုးကို ဈေးကွက်ထဲမှာ ၀ယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။)
The house has just come on the market. (ဒီအိမ်ဟာ အခုလေးတင်ပဲ ဈေးကွက်ပေါ်ရောက်လာလို့ ၀ယ်ယူလို့ရနိုင်ပါပြီ။)
သင့်အနေဖြင့် အရာတစ်ခုခုကို in the market ဖြစ်နေရင် အဲဒီအရာကို ၀ယ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်ပါတယ်။
I'm in the market forasecond hand car. (တစ်ပတ်ရစ်ကားတစ်စီးကို ကျွန်တော် ၀ယ်ချင်ပါတယ်။)
In the market ကို ကုမ္ပဏီနဲ့တွဲသုံးရင်တော့ ၀ယ်သူအတန်းအစားတစ်မျိုးတည်းကို ကြိုးစားပြီး ရောင်းချခြင်းကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
The DIY Company isanew player in the market. (DIY ကုမ္ပဏီဟာ ဈေးကွက်မှာ အသစ်ဝင်ရောက် ပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
"In the market" ကို ဈေးကွက်များရဲ့ ယေဘုယျအခြေအနေတွေကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်းသုံးပါတယ်။
Conditions in the market are not very favourable. (ဈေးကွက်ရဲ့ အခြေအနေတွေကတော့ သိပ်ပြီး မကောင်းလှဘူး။)
There's been an upswing in the market. (ဈေးကွက်မှာတော့ တိုးတက်မှုရှိလာပါတယ်။)
အသားငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်လို့ရတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့ "ဈေး"အနေနဲ့ အသုံးပြုရာမှာလည်း in the market ကို အသုံးပြုပါတယ်။
I bought some cheese in the market. (ဈေးမှာ ဒိန်ခဲအနည်းငယ်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။)
4. By train / on the train / in the train (ရထားဖြင့် / ရထားပေါ်မှာ / ရထားထဲမှာ)
စာဖတ်သူ နောက်တစ်ဦးကတော့ train (ရထား) နဲ့ တွဲပြီး အသုံးပြုတဲ့ ၀ိဘတ် (prepositions) တွေ အကြောင်းကို မေးလာပါတယ်။
Train ကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ် ဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာတော့ အညွှန်းစကားလုံး (article) မပါဘဲ by နှင့် တွဲသုံးပါသည်။
It's more expensive by train. (ရထားနဲ့ဆိုရင် ပိုပြီး ဈေးကြီးပါတယ်။)
တစ်စုံတစ်ရာသော ခရီးစဉ်အတွက်ဆိုရင် by (သို့) on ကို တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
I came by train / on the train. (ကျွန်တော် ရထားဖြင့်လာခဲ့ပါတယ်။)
တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ ခရီးသည်ဖြစ်ပြီး တကယ်ပဲရထားထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြောလိုတဲ့အခါ သိပ်မဆီလျော်ပေမဲ့လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် on the train လို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ရထားပေါ်ကနေပြီး ဖုန်းပြောသူများကလည်း I'm on the train လို့ ပြောကြပါတယ်။
There wasarestaurant car on the train. (ရထားပေါ်မှာ စားသောက်တွဲလည်း ပါပါတယ်။)ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုလည်း သတိပြုပါ။
In the train ဟူသော အသုံးအနှုန်းက ပုံမှန်အသုံးအနှုန်းသိပ်မဟုတ်ပေမဲ့ ရထားအတွင်းမှာရှိတဲ့ အခြေအနေများကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာတော့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
It was cold on the train / in the train (ရထားပေါ်မှာ အေးတယ်။)
5. University နှင့်တွဲ သုံးသော ၀ိဘတ်များ (Prepositions with university)
နောက် 'Grammar to go' ဖတ်သူတစ်ဦးကတော့ အောက်ပါ ၀ါကျများ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပေး စေလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
He goes to university. (သူ တက္ကသိုလ်တက်သည်။)
He studied law at the university. (တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေပညာကို သူသင်ယူခဲ့သည်။)
He's waiting for somebody in the university. (in the building) (တက္ကသိုလ်ထဲမှာ သူ တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို စောင့်နေသည်။) ဒီနေရာမှာ in the university ဆိုတာ အဆောက်အဦးအတွင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဝါကျတွေဟာ တကယ်ပဲ မှန်ပါတယ်။ ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်စကား (British English) မှာတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် တက်နေတယ်ဆိုတာကို ရည်ညွှန်းလိုတဲ့အခါ to နှင့် at တို့နောက်က the ကို ဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ (အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်စကားမှာ တော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါ။) ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဒီတစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ တိတိကျကျ ဘယ်တက္ကသိုလ်မှာ တက်နေတယ်ဆိုတာကို မပြောဘဲ ရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ the ကိုတော့ ပြောသူက ဘယ် တက္ကသိုလ်ကို ရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာကို သိတဲ့အခါမှာ ထည့်သုံးရပါတယ်။ တခြားသော အခြေအနေမှာတော့ the ကို ထည့်သုံးရပါမယ်။
He went to the university to see an art exhibition. (သူသည် ပန်းချီပြပွဲကြည့်ဖို့ တက္ကသိုလ်ကို သွားခဲ့ သည်။)
6. On / In the list (စာရင်းထဲမှာ)
On the list နှင့် in the list တို့ရဲ့ အသုံးပြုပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ဦးဟာ အတွေးရခက်နေပါတယ်တဲ့။ on the list ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ "စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်တယ်" ပဲဖြစ်ပါတယ်၊
I'm sorry, your name isn't on the list. (စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ခင်ဗျားနာမည်စာရင်းထဲမှာ မပါပါဘူး။)
Have you packed everything on the list. (စာရင်းထဲမှာပါတာတွေအားလုံးကို ထုပ်ပိုးပြီးပြီလား?)
ဒီနေရာမှာ in အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပေမဲ့လည်းသိပ်တော့ ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ In သည် ပို၍ ဆီလျော်ပေမဲ့လည်း ဘာသာစကားဆိုတာမျိုးက ယုတ္တိဗေဒရဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေသ (rules of logic) ကို အမြဲတမ်းလိုက်နာခြင်းမရှိပါ။
In ကို အများအားဖြင့် included ဖြင့် တွဲ သုံးလေ့ရှိပါသည်။
The item wasn't included in the list. (အဲဒီအရာကတော့ စာရင်းထဲမှာ မပါပါ။)
7. In / On the last chapter (နောက်ဆုံးအခန်းမှာ)
အခန်း (chapter / unit) နဲ့ ပတ်သက်လာရင် in သုံးပါသလား (သို့) on ကို သုံးပါသလား? အဖြေကတော့ in ကို ပဲသုံးပါတယ်။
There was an excerise in the previous unit I couldn't do. (ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာ ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါခဲ့တယ်။)
What happens in the next chapter? (နောက်အခန်းမှာ ဘာဖြစ်သွားလဲ?)
အထက်ဝါကျတွေမှာ on ကို အသုံးပြုလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ "about" (နဲ့ ပတ်သက်လို့) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပြောတဲ့အခါမှာတော့ on ကို အသုံးပြုရပါတယ်။
We had to comment on the last chapter. (နောက်ဆုံးအခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးသပ် ချက်ကို ပေးရပါတယ်။)
8. The tallest in /of the class (အတန်းထဲမှာ အရပ်အရှည်ဆုံး)
Italy က ဆရာမတစ်ဦးကတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ စာသင်ခန်းထဲမှာ အရပ်အရှည်ဆုံးဖြစ်နေရင် the tallest in the class ကို သုံးပါသလား ဒါမှမဟုတ် the tallest of the class လို့ သုံးရပါသလား လို့ မေးထားပါတယ်။ သဒ္ဒါ (grammar) သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိပါ လို့လည်း ညည်းညူထားပါသေးတယ်။ တကယ်တော့လည်း သူပြောတာ မှန်နေပါတယ်။ Grammar ရဲ့ တစ်ချို့ကဏ္ဍတွေဟာ သုံးနေကျ ဥပဒေများနဲ့ ရှင်းပြလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့သော grammar ကတော့ သူ့အလိုလိုခြုံငုံ၍ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ တတိယပုဂ္ဂိုလ်နာမ်စားရဲ့ ရိုးရိုးပစ္စုပန်ကာလ အနည်းကိန်း (the present simple third person singular) ဟာ အဆုံးသတ်မှာ 's' ထည့်ပေးရတာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ၀ိဘတ်တွေနဲ့ကျတော့ အများအားဖြင့် အီဒီယမ် (idioms) များကို ကျက်မှတ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ in the class (သို့) of the class ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အုပ်စုတွေ (groups) (သို့)နေရာတွေ (places) အကြောင်းပြောတာဆိုရင်တော့ in သည် သတ်မှတ်ထားတဲ့စံပဲဖြစ်ပါတယ်။
Who is the tallest in the class? (အတန်းထဲမှာ ဘယ်သူအရပ်အရှည်ဆုံးလဲ?)
Which is the longest river in the world? (ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်မြစ်ဟာ အရှည်ဆုံးလဲ?)
ဒီနေရာမှာ ကျောင်းသားများက of ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် ရှင်းလင်းပေမယ့် ဒီလိုအခြေအနေမှာ of ကို သုံးခြင်းဟာ တော်တော်လေးထူးဆန်းပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကြီးမားတဲ့ အမှားတော့မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် of ကိုသုံးတဲ့ အခြေအနေများလည်း ရှိပါတယ်။
The festival is the biggest event of the year. (ဒီပွဲဟာ တစ်နှစ်တာရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပါတယ်။)
I think Claire is the nicest of the three sisters. (ညီမသုံးယောက်ထဲမှ Claire ဟာ သဘောအကောင်းဆုံး လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။)
This photo is the best of all. (အားလုံးထဲမှာ ဒီဓါတ်ပုံက အကောင်းဆုံးပဲ။)
Of ကို အချိန်ပြပုဒ်များ (Phrases of fine)၊ အများကိန်းများ (plurals)နှင့် all တို့နှင့် တွဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။
9. At / On platform2(စင်္ကြ (၂) မှာ)
Grammar to go စာဖတ်ပရိတ်သတ်တစ်ဦးကတော့ the train at Platform2နဲ့ the train on Platform2အသုံးအနှုန်း ၂ ခုကြားမှာ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေပါတယ်။ British English မှာဆိုရင်တော့ at က ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
The train (now standing) at Platform2is the 1450 for Manchester . (ယခုစင်္ကြ ၂ မှာ ဆိုက်ထားတဲ့ ရထားကတော့ မန်ချက်စတာကိုသွားမယ့် ၁၄၅၀ ပဲဖြစ်ပါတယ်။)
People wait on the platform (လူတွေဟာ စင်္ကြပေါ်မှာ စောင့်ကြပါတယ်။)
The train is at the platform.(ရထားဟာ စင်္ကြမှာ ဆိုက်နေပါတယ်။)
It leaves from platform2. (စင်္ကြ ၂ မှ ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။) လို့ သုံးနှုန်း ကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းကတော့ နေရာကို ဖေါ်ပြတဲ့ ၀ိဘတ်အဖြစ်သုံးထားတဲ့ at နဲ့ on တို့ရဲ့ ပုံမှန် အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။